Somali - Villa Victor - Oulun kaupunki
Villa Victori – waa adiga
Villa Victori waa xarunta dhaqamada kala duwan ee magaalada Oulu. Waxaan bixinaa adeegyo kala duwan oo lacag la'aan ah oo la siiyo dadka waddanka u soo guurey iyo dadka deegaanka. Villa Victori waxaad ka heli kartaa talo luqado badan ku qoran iyo macluumaad ku saabsan mowduucyo kala duwan. Sido kale anaga waxaad naga baran kartaa luqada Finnishka oo koorsooyin kala duwan ah, waxaadna ka heli kartaa talo Somaali ah iyo dhoor iyo 10 luqadood oo kale.
La -talinta luuqadaha badan
La-talinta luqadaha badan ee Villa Victori, waxaad ka heli kartaa caawimo ku noolaanshaha Oulu iyo Finland in ka badan 15 luqadood oo fool ka fool ah, ama taleefanka iyo WhatsApp.
Nala soo xidhiidh, tusaale ahaan:
hadi aad u baahan tahay in lagaa caawiyo dukumentiyada, foomamka iyo ballamaha
hadi aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sidii aad u sii wadan lahay waxbarashada ama aad shaqo ka raadin lahayd Oulu,
hadi aad raadinayso hiwaayad cusub ama waqtiga aad firaqada tahay waxaad qaban laheed,
haddadnu soo guurtay Oulu ama Finland oo aad u bahan tahay taageero arrimaha la xiriira guuritaanka
ama haddii kale oo aad ku jirto xaalad nololeed oo aad u baahan tahay caawimaad.
Waxaad talo ku heli kartaa Af-Somali ballan la'aan ama waxaad horay u qabsan kartaa ballan. Talo si ay kuu caawiso ama ku toosiso adeega saxda ah! Waxaad ka wici kartaa talefonka ama WhatsAppka 040 589 1724.
Talo-bixinta luqadda Afka Somaliga waxaad ka heli kartaa Oulu10 (Saaristonkatu 8) QAMIIS kasta sacda 14.00-16.00 Galabnimo. Fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto!
Villa Victori, Finnishka waxaa lagu bartaa heerar kala duwan laga bilaabo bilawga ilaa heerarka sare si aan joogsi lahayn. Koorsada Aan Bilowno waxay ku habboon tahay ardayda aan asalka u lahayn barashada Finnishka. Kooraskaas iyo sidoo kale koorsooyinka aasaasiga ah ee 1 iyo 2 iyo koorsada sare waxay ku jiraan fasalka xiriirka, koorsada Finland ee Advanced koorsada iyo koorsada internship ee YKI ayaa fogaanaya. Waxaad ka hubin kartaa saacadaha saxda ah ee koorsooyinka boggaga Finnishka ama Ingiriisiga.
Kooxda hagitaanku waa dad wax bartay oo shaqo la'aan ah ama hore u joogay shaqada, kuwaas oo hore u yaqaanay qaar Finnish ah (ugu yaraan heerka B1).
Ujeeddada la -talinta ayaa ah in la kordhiyo shabakadaha xirfadeed ee dadka waddanka u soo guurey iyo in la xoojiyo aqoontooda nolosha shaqada iyo caadooyinka Finnishka.
Wax badan oo ku saabsan la-talinta waxaad ka akhriyi kartaa boggaga talobixinta luqadda Finnishka.
Waxaan bixinaa macluumaad bille ah oo ku saabsan mowduucyo kala duwan oo lagu turjumay dhowr luqadood oo kala duwan. Waxaan ka hadleynaa mowduucyo waxtar u leh muhaajiriinta. Mawduucu wuxuu ahaan karaa tusaale ahaan fursadaha waxbarasho ee Oulu, nolosha ama sida maktabadda iyo adeegyada isboortiga ee Oulu. Waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan macluumaadka oo Finnish ama Ingiriis ah.
Villa Victori waxay qabanqaabisaa xafladaha dhaqamada kala duwan sanadka oo dhan: tusaale ahan dhacdada loo yaqano Ku soo dhawoow Oulu, Ama adeegaaga, makhaayadda midabka leh, iwm. Waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhacdada waxad ka heli karta bogena macluumaadka oo Finnish ama Ingiriis ah. Ku soo dhawoow bandhigyada!
Waxaad ka eegi kartaa macluumaadka hadda jira kanaalada warbaahinta bulshada ee Villa Victori ama boggena internetka ee Finnish iyo Ingiriis, ama waxaad macluumaad dheeraad ah ka weyddiin kartaa qeebta la-taliyayaal luqadaha badan ku hadla.